El Calao de 4 Copas - I-Airbnb
Rodezno, La Rioja, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Julián
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Julián izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Yindlu enamagumbi amathathu aphindwe kabili aneziko kanye ne-centenary cellar.
I-Calao de Cuatro Copas iyindawo ekahle yokujabulela usuku lokuphumula nomndeni noma abangani. Yindlu esendaweni ethule lapho ungenza khona ukuhambahamba phakathi kwezivini ezinokubukwa okumangalisayo kweRioja Alta.
Endlini kufanele ujabulele ukuphuza iwayini laseRioja eCalao, lapho lenziwe khona amakhulu eminyaka.
Ngamthanda uRodezno kanye necala lakhe. Ngokungenisa izihambi kwabantu bayo, iwayini layo kanye ne-gastronomy, yesimo sezulu sayo. Kusukela isiko layo eminyaka ubudala isiko iwayini.
Yindawo lapho ngithola khona ukuzinqamula ekucindezelekeni kwempilo yansuku zonke edolobheni. Ayikho intokozo efana nokuthatha iwayini ku-centennial calao. Ukudla endlini engaphansi nomkhaya nabangane, ukupheka emalahleni eziko kuyisenzakalo esiyingqayizivele nemiphumela yako emide endaweni ekhululekile.
Ukuhamba phakathi kwezivini kuyangiphumuza futhi kudala emqondweni wami umuzwa wokuthi ISIKHATHI SIYEMA.
IRodezno iyidolobha elincane eLa Rioja elizungezwe izivini, 4 km ukusuka eHaro, 44 km ukusuka eLogroño kanye namakhilomitha angama-45 ukusuka eVitoria. Idolobhana linendawo yokubhukuda, indawo yokubhukuda kanye nenkundla yezemidlalo.
Inesifunda esiphakeme esinezindawo zokuthengisa iwayini eziyi-110 ezinamatheku aneminyaka eyikhulu ubudala. I-calao yindawo engaphansi komhlaba embiwe edwaleni, enezinga lokushisa elizinzile unyaka wonke, lapho kwenziwa khona iwayini.
Kukule ndawo lapho i-El Calao de 4 Copas (igama owazi ngalo umndeni kusukela ezizukulwaneni ezedlule). Izungezwe izivini futhi ungabona i-Rioja Alta nezintaba zayo. Ungakwazi ngisho nokubuka i-Sierra de la Demanda eneziqongo zayo ezimbozwe yiqhwa ebusika.
Esigodini kukhona amabha ama-3 anokuzijabulisa okuhle kakhulu nokudla. Kutuswa ukuthi ubhukhe ngenxa yokuceba okukhulu okwethulwa izinga eliphezulu/intengo yamamenyu abo.
Ungavakashela i-Bodegas de Haro, i-Briones namanye amadolobha aseduze. ISanto Domingo de la Calzada (15 Km), idolobha eliyifanekiselo leCamino de Santiago, kumele ubone iKhathedrali layo.
ESan Millán (26 km) kukhona Izigodlo ZaseYuso naseSuso, okuyimvelaphi yolimi lwesiCastilian. Kubalulekile ukubhukha.
Hlola ezinye izinketho ezise- Rodezno namaphethelo